मोबाइलमा कुन के’टासँग बोलेको ? भनेर आमाले सोध्दा छोरीले दिएको त्यो ध’क्का ! – Sadhaiko Khabar
मोबाइलमा कुन के’टासँग बोलेको ? भनेर आमाले सोध्दा छोरीले दिएको त्यो ध’क्का !
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ समय: १६:२६:००
काठमाडौ / आमाले धेरै मोवाइलमा नभुल्नु भनेर सम्झाउँदा घर छो’डेर हिँडेकी एक किशोरीलाई प्रह’रीले भारतवाट उ’द्दार गरेको छ । उनी आफै भारत पुगेकी थिइन् ।
भारतमा कोठा लिएर बसेकी किशोरीलाई अर्की एक महिलाले २० हजार भारुमा बे’चिदिएकी थिइन् । मोरङ स्थायी घर भएकी किशोरी का बुवा आमा चिया पसल चलाउँथे । तर कि’शोरी भने एक जना युव’कसंग फोनमा निकै धेरै कुरा गरिरहन्थिन् ।
आमाले आफुले भनेको नमानेपछि बुलालाई भनिदिन्छु भनेर सम्झाउंदा उनी घर छोडेर हिँडेकी थिइन् । उनको प्रेमी भनिएका ति युवकलाई प्रह’रीले प’क्राउ गरेर अनु’सन्धान थालेपछि कि’शोरी भारतमा रहेको खुलेको थियो । यद्धपी कि’शोरीलाई भारत पुर्याउनेमा ति युवकको हात भने छैन ।
युवकलाई भारतवाट आएको फोनका आधारमा प्र’हरीले उनलाई पक्रा’उ गरेर अनु’सन्धान थालेको थियो । तर उनलाई आएको फोन भारतकी एक माया नाम गरेकी महिलाको थियो ।
ती महिलाले किशोरीलाई भारतको विहारको सिमराई भन्ने स्थानमा कोठा भाडामा लिएर बसेको बेलामा फे’ला पारेकी थिइन् । आमासंग रि’साएर भारतको सिमराई पुगेकी ति किशोरी त्यहाँ कोठा भाडामा लिएर बसेकी थिइन् ।
मायाले कि’शोरीलाई डा’न्सबारमा काम लगाइदिन्छु भनेर फकाइन् तर उनले नराम्रो काममा लगाउन खोजेपछि उनले मानिनन् । यस्तो नराम्रो काममा लगाउन मायाले ति कि’शोरीलाई निकै या’ त’ ना समेत दिएकी थिइन्
त्यसको घा’उ चो’ ट अहिले पनि किशोरीको श’रि’रमा छ । जति गरेपनि ध ‘न्दा मा लगाउन नसकेपछि मायाले गुडगाउँको एक च’टक देखाउने पु’रुषलाई २० हजार भारुमा बे चिदिइन् ।
ति कि’शोरीले च’टक देखाउनेले भने आफुलाई न’राम्रो नगरेको बयान दिएकी छन् । उनले राम्रा लुगा किनिदिने, डा’न्स गर्न लगाउने काम मात्र गराउँथे ।
प्रह’रीले मायाको फोन कल रेकर्ड (सिडिआर) हेरेपछि बल्ल मायाले ति कि’शोरीलाई आफुले हरियाणाको गुडगाउँको पुरुषलाई बे’चिदिएको बताएकी थिइन् । हरियाणामा बस्ने मोहम्मद मुवारक नाम गरेका व्यक्तिसँग २० हजार लिएर मायाले कि’शोरीलाई बे’चिन् । त्यसपछि उनी मुवारकसँगै हरियाणा पुगेकी थिइन् ।
प्रह’रीले ति कि’शोरीलाई भारतीय प्र’हरीको सहयोगमा उ’द्दार गरेको छ । १६ वर्षीय किशोरी एक्लै बसेको देखेर मायाले उनलाई ग ल त काममा लगाउने प्रयास गरेकी थिइन् । गत वैशाख ९ गते आमाले राखेको केही पैसा बोकेर भारततर्फ लागेकी ति किशो’रीलाइ प्रह’रीले नेपाल ल्याएको हो । उनलाई अहिले आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ ।
यो पनि :- मोबाइल फोनको बढी प्रयोगले ए’काकी बन्दै बालबालिका :
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– ७ का दिपेन पुन निद्राबाट बिउझिँने बित्तिकै टेबुलमाथिको मोबाइल हातमा लिन्छन् । मोबाइलको स्क्रिन हेरेर उनको दैनिकी शुरु हुन्छ ।
कक्षा ६ मा पढ्ने १२ वर्षीय पुनले मोबाइलमा के हेर्छन् त्यो त परिवारलाई पत्तो हुँदैन । उनले मोबाइल नपाउञ्जेलसम्म रिसा’उने, झ’र्किने र खानै नखाइदिने गर्छन् । जसले गर्दा उनको परिवार पनि त’नावमा रहनुपर्छ ।
अनलाइन क्लासको बहा’नामा बालबालिका ए’क्लिदै गएका र उनीहरुको आनिबानीमा नका’रात्मक परिवर्तन दे’खा पर्न थालेपछि अभिभावक चि’न्तित बनेका छन् ।
“बिहान उठ्नसाथ मोबाइल नहेरी अरु कुनै काम गर्न मान्दैनन्”, बेनी नगरपालिका– ४ सिगाका अभिभावक मोहन पौडेलले भन्नुभयो,“न बाबाआमा, न साथी सङ्गती, मोबाइल पाएपछि अरु कोही पनि चाहिदैन, यस्तो पाराले त कसरी बनाउँछन् खै आजभोलिका बालबालिकाले राम्रो भविष्य ?”, पौडेलले चि’न्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
पौडेलको जस्तै चि’न्ताले अहिले अधिकांश अभिभावक पि’रोलिएका छन् । अनलाइन कक्षाको नाममा बिहान उठेदेखि राति ११÷१२ बजेसम्म बालबालिका मोबाइल र ल्यापटपमा घो’प्टिने गर्न थालेपछि अभिभावकले आ–आफ्ना बालबालिकाप्रति निगरा’नी त बढाउन थालेका छन् तर परिणाम भने झन विप’रीत प्राप्त भइरहेको अभिभावकको गु’नासो रहने गरेको छ ।
“बिहानदेखि रातिसम्म नै मोबाइलमा व्यस्त हुन थालेपछि मैले तीन दिनसम्म बच्चाको नि’गरानी गरेंँ, अनलाइन क्लासमा ज्वाइन नै नभइ, पब्जी र अरु ना’नाभाँतिका खेल पो हेर्दोरहेछ”, बेनीका अभिाभवक सुमन सापकोटाले भन्नुभयो, “त्यसपछि सम्भाइबुझाइ गर्दा उ’ल्टै खानै खान मा’नेन, रि’साउने,झ’र्किने पो गर्न थाल्यो ।”
म्याग्दीका प्रायः सबै अभिभावक मोबाइल फोन र इन्टरनेटले आफ्ना छोराछोरी कस्तो बाटोमा लाग्ने हुन् भन्ने कुराले चि’न्तित छन् । को’रोना सङ्क्र’मणका कारण भौतिकरुपमा उपस्थित भई विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने वातावरण नभएपछि विद्यालयले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । तर, अधिकांश बालबालिकालाई अनलाइन क्लास मोबाइल खेलाउन पाइने गतिलो बहाना बनेको छ ।
शुरु शुरुमा बालबालिकालाई भुलाउन मोबाइल दिने गरेका अभिभावक पनि मोबाइलबिना अहिले बस्नै नसक्ने भएपछि त’नाबमा छन् । पछिल्लो समय अभिभावकको मनमा एउटै मात्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ–बच्चालाई मोबाइलको ल’तबाट कसरी छु’टकारा दिलाउने?
ज्यामरुककोटकी लक्ष्मी सुवेदीले छोरी सानो छँदा घरधन्दा भ्याउनुपर्ने अवस्था भएकाले मोबाइल खेलाउन दिएर भुलाउने गर्नुहुन्थ्यो । विस्तारै विस्तारै छोरीलाई मोबाइल खेलाउने बानी भयो । अहिले मोबाइल भएपछि आमाबुबा, साथीभाई नै भुल्ने र कोठाबाट बाहिर निस्कन नमा’न्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न थालेपछि आफू आ’जित बनेको लक्ष्मीले सुनाउनुभयो ।
बालबालिकामा विकसित हुँदै गएको एक’लकाँटे प्रवृत्तिको असर दीर्घकालसम्म पर्ने भएकोले यसतर्फ अभिभावक सचे’त रहनुपर्ने समाजशास्त्री तथा बाल मनोविज्ञानका जानकारको राय रहेको छ ।
पछिल्लो समय अभिभावकको व्यस्त जीवनशैली र प्रविधि प्रयोगका कारण बालबालिका समाजमा घुल’मिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न रुचाउने जस्ता आनीबानी बढ्न थालेको बालरोग चिकित्सक डा मीना शाक्यले बताउनुभयो ।
मोबाइल फोन भेटेपछि घण्टौंसम्म एक्लै बस्ने, कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी बोल्ने जस्ता संस्कार बालबालिकामा ह’राउँदै गएको अभिभावकको गुना’सो छ । फाईल तस्वीर ।